ကျောင်းဆင်းပွဲအသေးစိတ်» Hodges တက္ကသိုလ်
ကြိုဆိုပါတယ် Hodges ဘွဲ့ရ !!!
သင့်ရဲ့ဒီဂရီဝင်ငွေနှင့်သင်၏အနာဂတ်အတွက်လာမည့်ခြေလှမ်းကိုယူ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့အသီးအသီးအဘို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ဂုဏ်ယူကြသည်! ဤအခန်းသည်အဆုံးသတ်လုနီးပြီဖြစ်သော်လည်းသင်၏ဘွဲ့အသစ်သည်ရှေ့ဆက်သွားမည့်ခရီးအတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာအတွက်အစမျှသာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယခုနှစ်တွင်သင့်ကိုတွေ့မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် ၃၁ ကြိမ်မြောက်အခမ်းအနား!
ရက်စွဲ - ၂၀၂၁၊ တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် - ညနေ ၄း၀၀
တည်နေရာ: Hertz Arena၊ ၁၁၀၀၀ Everblades Parkway၊ Estero, Florida ၃၃၉၂၈
နှစ်စဉ်ကျောင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသည်ကျောင်းသားများနှင့် Hodges မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် Hodges တက္ကသိုလ်မှကျင်းပသောအထင်ရှားဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာပွဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ဇွဲရှိခြင်းနှင့်ကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများအားလုံးအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကတိက ၀ တ်တို့၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောနေ့ကိုကျင်းပသင့်သည်။ ငါတို့ ၃၁ ကြိမ်မြောက်အခမ်းအနား သင်၏ပညာရေးအောင်မြင်မှုနှင့်အတူလိုက်ပါလာသောရိုးရာပွဲများကိုဂုဏ်ပြုလိမ့်မည်။ ယခုနှစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမည်သည့်ကျောင်းသားမှဘွဲ့မရရှိပါ မေလ 6nd, 2019 မှဇွန်လ 2, 2021.
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့အတွက်သင့်အားပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော Graduation Checklist ကိုပေးထားပါသည်။ ဤစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းသည်တရားဝင်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကိုအစားထိုးသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဇွန်လ ၂၀ ရက်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်မည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါth ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့။
ကျောင်းသား / သူတိုင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အစတွင်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘွဲ့ရရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တက္ကသိုလ်ကက်တလောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတက္ကသိုလ်ဘွဲ့လိုအပ်ချက်များကိုသင်ပြည့်မီကြောင်းအတည်ပြုရန်သင်၏ကျောင်းသားအတွေ့အကြုံအကြံပေးနှင့်စစ်ဆေးပြီးကြောင်းသေချာစေပါ။ သင်လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်မကိုက်ညီပါကလိုအပ်ချက်များအားလုံးမပြည့်မှီမီသင့်ဘွဲ့ကိုထပ်မံပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီစေရန်သင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ထားပါ။
၂။ Cap၊ Gown နှင့် Tassel တို့ကိုမှာလိုက်ပါ
ကျောင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင်ပါ ၀ င်လိုသောကျောင်းသားများသည်ကျောင်းပြီးချိန် regalia (ဦး ထုပ်၊ ဂါ ၀ န်နှင့် tassel) ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်။ မေလ 21, 2021။ အချိန်မီဖြန့်ဝေမှုသေချာစေရန်ကျောင်းသားများအားဤနောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီကြိုတင်မှာကြားထားရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ဒီဝယ်ယူမှုဟာကျောင်းဆင်းပွဲအခကြေးငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မပါဝင်ပါ။ ဤပစ္စည်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်မှာယူနိုင်ပါသည် ဟတ်ဖ်ဂျုံးစ် သို့မဟုတ်ကျောင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်ဖြစ်စေ။
3. Honor ကြိုး, ပါးပျဉ်းနှင့်တံသင်
ဤဂုဏ်ထူးဆောင်ပစ္စည်းများအား Fort Myers ကျောင်းဝင်း၌ကောက်ယူရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး သို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး အားသင့်အတွက်ကြိုးများယူရန်လည်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။ သူတို့ကိုစတင်သည့်နေ့၌လည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တင်သည့်အခမ်းအနားအတွက် Hodges တက္ကသိုလ်မှ GradImages ကိုတရားဝင်တင်သည့်ဓာတ်ပုံအဖြစ်ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ပွဲစဉ်တစ်ခုစီ၏ဘွဲ့တစ်ခုစီ၏ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံကိုရိုက်ယူသည်။
အခမ်းအနားပြီးနောက် ၄၈ နာရီအလိုတွင်သင်၏သက်သေအထောက်အထားများကိုအွန်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မှာယူရန်မည်သည့်တာဝန်မျှမရှိသော်လည်းသင်သည်သင်၏ပါ ၀ င်မှုအတွက်အမှာစာ ၂၀% မှဒေါ်လာ ၅၀ နှင့်အထက်ကိုချွေတာပါ။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းသည်သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို GradImages နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်အောင်သေချာစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မှသာသင်၏ဖြည့်စွက်ချက်အထောက်အထားများကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏တင်သည့်သက်သေများအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ တကယ။
သင်၏ကျောင်းဆင်းခြင်းနှင့်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပါ ၀ င်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ GradImages သည်သင့်အားအီးမေးလ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံအထောက်အထားများကိုပေးပို့လိမ့်မည်။
အလားအလာရှိသောဘွဲ့ရများသည်ဘွဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပြီးမြောက်အောင်ပြီးမြောက်ရမည် မေလ 2, 2021, တင်သည့်အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းခံရဖို့။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုမှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏ဒီပလိုမာတွင်ပုံနှိပ်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အတွက်ဖိုင်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များမှဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒီပလိုမာများကိုဖိုင်ရှိလိပ်စာရှိကျောင်းသားများအားပို့လိမ့်မည်။
ကျောင်းမဖွင့်မီကျောင်းသားများ၏အကောင့်များရုံးရှိသူတို့၏အကောင့်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်ကျောင်းသားအားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ တက္ကသိုလ်နှင့်ပတ်သက်သောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးကိုကျေပွန်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်သင့်အားဒီပလိုမာနှင့် / သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းများကိုအချိန်မီရရှိခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။.
အခမ်းအနားညွှန်ကြားချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်ည ၁း၃၀ ထက်နောက်မကျဘဲရောက်ရှိရန်စီစဉ်ပါ။
ဆိုက်ရောက်သည့်အခါဘွဲ့ရများသည် Hertz နယ်မြေ၏အရှေ့ဘက်ဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့်ဝင်နိုင်သည်။
ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ချင်းစီသည်သူ / သူမ၏နာမည်ကဒ်ကိုစင်မြင့်နောက်ကွယ်ရှိစားပွဲများ၌ကောက်ယူပါလိမ့်မည်။ ကဒ်ပြားများကိုသင်၏တရားဝင်အမည်ဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းဖြစ်ပြီးတင်သည့်အစီအစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသည်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဘွဲ့လွန်ထိုင်ခုံများကိုပုဒ်မ ၁၁၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၇ စသည်တို့ဖြင့်အက္ခရာအရနှင့်အစီအစဉ်အရထိုင်ခုံနံပါတ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။
သင့်ထိုင်ခုံသို့ရောက်ရန်အပေါ်ထပ်ကိုတက်ရမည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ အကယ်၍ ဤပြသနာသည်ပြသနာဖြစ်ပါကအစပြုခြင်းနေ့မတိုင်မီတက္ကသိုလ် ၀ န်ထမ်းများအားအသိပေးပါ။
အကယ်၍ သင်၏နေရာတွင်အစားထိုးလိုပါကအပိုဆောင်းအဖုံးများနှင့်ဝတ်ရုံများကိုအခမ်းအနားသို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပြanနာရှိပါကတက္ကသိုလ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်တွေ့ပါ။ အခမ်းအနားတွင်အပိုအထည်နှင့်ဂါဝန်အကန့်အသတ်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ အခမ်းအနားမစတင်မီ ၄ ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောမင်းကုပ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဂါဝန်တွင်ပြproblemsနာများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ Fort Myers ကျောင်းဝန်းသို့လာပြီးအရန်ဝန်ဆောင်မှုများရုံးနှင့်အစားထိုး ဦး ထုပ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဂါဝန်အကြောင်းပြောဆိုပါ။
Dress Code & အပြုအမူ
ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကာလအတွင်းသင့်အနေဖြင့်ပညာရေးဝတ်စုံအပြည့်အစုံ (ဦး ထုပ်၊ ဂါဝန်၊ ဂုဏ်အသရေ၊ သို့မဟုတ် Master's hood, ရှိလျှင်) ၀ တ်ဆင်ရမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Hertz Arena သို့ရောက်ပြီးမှဘွဲ့ရများသည်သူတို့၏ ဦး ထုပ်နှင့်ဝတ်ရုံကို ၀ တ်ဆင်ရမည်။ ၀ န်ထမ်းများကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများအားမိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ် guests ည့်သည်များနှင့်ထားခဲ့ပါ။
ရိုးရာဝတ်စုံဖြင့်ဝတ်ဆင်ရသောအ ၀ တ်အစား:
အမျိုးသားများ - ၀ တ်စုံအင်္ကျီ၊ လည်ဆွဲ၊ အနက်ရောင်ဖိနပ်များနှင့်အနက်ရောင်ဖိနပ်များပါ ၀ တ်ဆင်သည့်အင်္ကျီ။
အမျိုးသမီးများ - အနက်ရောင်၊ တံခါးပိတ်ဖိနပ်ပါသည့်အနက်ရောင်ဝတ်စုံ၊ စကတ်သို့မဟုတ်ဘောင်းဘီနှင့်အင်္ကျီ။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ဖိနပ်မပေးပါ။ ခြေညှပ်ဖိနပ်များ၊ တင်းနစ်ဖိနပ်များနှင့်အဖြူရောင်ဖိနပ်များကိုမဝတ်သင့်ပါ။
ဦး ထုပ်သည်ညာဘက်အခြမ်းတွင် tassel နှင့်တွဲလျက်ပြားနေသင့်သည်။ ဓာတ်ပုံများရိုက်နေစဉ်ဘွဲ့ရများသည်ဂရုစိုက်ရန်ဂရုစိုက်သင့်သည်။
သက်ဆိုင်ပါကဂုဏ်ပုဒ်ကြိုးများကိုတစ်ဖက်စီမှဆွဲကြိုးနှင့်လည်ပင်းတစ်လျှောက်ပတ်ထားသင့်သည်။ Honor ကြိုးများကိုတက္ကသိုလ်ပေါ်လစီအရဖြန့်ဝေသည်။
summa cum laude အတွက်ငွေနှင့်အနီရောင် (3.90-4.0 GGPA);
magna cum laude (၃.၇၆-၃.၈၉ GGPA) အတွက်နှစ်ချက်နီ၊ ဒါမှမဟုတ်
cum ခြီးမှမျးများအတွက်နှစ်ဆငွေ (3.50-3.75 GGPA)
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအခမ်းအနားကိုစီစဉ်ရန်နှင့်တက္ကသိုလ်သည်တက္ကသိုလ်တိုင်းကိုကြိုးပမ်းသည်။ သင်၏ပညာရေးအောင်မြင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်လေးစားစွာလေ့လာသင့်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိနေခြင်းသည်ချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက်အခြေခံဖြစ်လိမ့်မည်။ တက္ကသိုလ်မှသင်ဒီပလိုမာကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်
ဘွဲ့ရများသည်စင်မြင့်ကိုဖြတ်ပြီးလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက်ပုဒ်မ ၁၁၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၇ တို့တွင်ထိုင်နေကြသည်။ ဒီအမိန့်ဟာဒီဂရီစတင်သည့်အစီအစဉ်တွင်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း၊ အက္ခရာအရနှင့်ဒီဂရီတို့နဲ့တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။
ညနေ ၃း၃၀ တွင်ကြမ်းခင်းareaရိယာသို့ပြောင်းရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ စင်မြင့်နောက်တွင်အတန်းများများနိုင်သမျှများများဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ စီတန်းလှည့်လည်သည့်အခါကျောင်းသားများသည်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကြမ်းပြင်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားသွားလိမ့်မည်။ နောက်ကျသောကျောင်းသူ / သားများကိုအခြားသောဘွဲ့ရများအားလုံး၏နောက်တွင်ထားမည်ဖြစ်ပြီးအခြားသူများနှင့်အတူတူပင်ဒီဂရီနှင့်အဓိကဝင်ငွေရသူများ၏ဘေးတွင်ထိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်မီရောက်ရန်သေချာစေပါ
Grand Marshal ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ
ဇာတ်စင် guests ည့်သည်များ
နယ်ပယ်၏မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိအဓိကကြမ်းပြင်ကိုရိုက်ပါ။ ထိုင်ခုံ၏နောက်ကျောအထိလမ်းတစ်လျှောက်လုံးရှေ့သို့သွားပါ၊ ညာဘက်သို့လှည့်ပါ၊ နောက်သို့အလယ်အတန်းသို့ပြန်ပါ။
ကျောင်းသားနှင့် speaker ည့်သည်စကားပြောသူများပြီးဆုံးသွားသောအခါသမ္မတကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးအား Master ဘွဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိမ့်မည်။
ဤအပိုင်းကိုပြီးသည်နှင့်သင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်တစ်ချိန်ကစင်မြင့်ကို ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်မည့်စင်မြင့်သို့ပို့လိမ့်မည်။
ဒေါက်တာ Meyer ထံမှဒီပလိုမာအဖုံးကိုလက်ခံရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမှာသင်၏ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်လက်ျာလက်ဖြင့်လက်ဆွဲပါ။
Grand Marshal သည်သင်၏ tassel ကိုလှည့်ပြီးသင့်လက်ကိုလှုပ်လိမ့်မည်။
Alumni ကွန်ယက်သည်သင့်အားလက်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ သင်ထိုင်ခုံသို့မပြန်မီဆရာများကသင့်အားဂုဏ်ပြုလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အပိုင်း (ခ) တွင်ထိုင်ပါကစင်မြင့်သို့ ဝင်၍ သင်၏ထိုင်ခုံသို့ပြန်လာရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Hodges တက္ကသိုလ် ၀ န်ထမ်းများကသင့်အတန်းမှမည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်မည်ကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။
အခြားဘွဲ့ရများလည်းထွက်ခွာရန်ကြိုးစားနေစဉ်စင်မြင့်နောက်ဘက်ရှိနေရာကိုရောက်သည့်အခါ ကျေးဇူးပြု၍ မရပ်ပါနှင့်။
တိုက်ရိုက်စတင်သည့်အခမ်းအနားကို ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၂၀ ရက်ညနေ ၄:၀၀ နာရီတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Hertz Arena သို့လမ်းညွှန်များ
မြောက်မှ - I-75 မှထွက်ရန် ၁၂၈ (Alico Road) သို့သွားပါ။ Alico လမ်းမကြီးပေါ်သို့ Ben Hill Griffin Parkway သို့သွားပါ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တောင်ဘက် 128 မိုင်အဘို့အဘင်ဟေးလ် Griffin ယူပါ။ Arena သည်ညာဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။
တောင်ပိုင်းမှ - I-75 မှထွက်ရန် ၁၂၃ (ဖော့ဆို့လမ်း) သို့သွားပါ။ Corkscrew လမ်းမကြီးပေါ်တွင်အရှေ့ကို ဦး တည်။ Ben Hill Griffin မြောက်ဘက်သို့ခေါ်ဆောင်ပါ။ Arena သည်ဘယ်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။
ကားရပ်ရန်နေရာသည်စတင်သည့်အခမ်းအနားမတိုင်မီသုံးနာရီ ကြိုတင်၍ ဖွင့်လှစ်သည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်ကားရပ်နားရန်နေရာများအတွက် Hertz Arena တွင်ကားရပ်နားရန်နေရာများစွာရှိသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများယူဆောင်လာရန် Hertz နည်းဥပဒေများ ***** ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ
Hertz Arena သည်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပြီး၎င်းကိုစက်ရုံထဲသို့ယူဆောင်ခွင့်မပြုပါ။ ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ တင်းကြပ်စွာပြဌာန်းလိမ့်မည်သည့်သူတို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအဘို့။
ည့်သည်များသည်ညနေ ၃း၃၀ မှ ၃း၃၀ အကြားရောက်သင့်သည်
မသန်မစွမ်းထိုင်ခုံများကိုတောင်ဘက်ခြမ်းတွင်ရနိုင်သည်။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နှင့်လွတ်လပ်စွာထိုင်ရသောကုလားထိုင်များအတွက်နေရာလွတ်ရှိသည်။ guest ည့်သည်တစ်ယောက်သည်မသန်မစွမ်း guest ည့်သည်တစ်ယောက်နှင့်အတူထိုင်နိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုစေလိုသည်မှာနယ်ပယ်တွင်ကလေးတွန်းလှည်းများ၊ ပူဖောင်းများနှင့်ပန်းများကိုခွင့်မပြုပါ။ တွန်းလှည်းများ၊ ပူဖောင်းများနှင့်ပန်းများကို Hertz ၀ န်ထမ်းများနှင့်အတူ check in လုပ်ပြီးအဓိကစားပွဲတွင်ထားမည်ဖြစ်ပြီးအခမ်းအနားအပြီးတွင်ကောက်ယူနိုင်သည်။
မိဘများ၊ မိသားစုများနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုထိုင်ခုံမှာထားရန်အားပေးခံရသည်။ အခမ်းအနားမှထွက်ခွာခြင်းသည်တက်ရောက်သူအားလုံးကိုအလွန်အမင်းမလေးစားကြောင်းပြသသည်။
Fort Myers ကျောင်းဝန်း၌ကောက်ယူရန်အတွက် Honor ကြိုးများရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး သို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး အားသင့်အတွက်ကြိုးများကောက်ယူရန်လည်းသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သူတို့ကိုစတင်သည့်နေ့တွင်သင်လည်းရွေးနိုင်သည်။
Hodges ဘွဲ့ရတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီဂျစ်တယ်ဒီပလိုမာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီပလိုမာကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဒီဂျစ်တယ်ဒီပလိုမာကိုရယူရန်ညွှန်ကြားချက်ကိုသင်၏ Hodges အီးမေးလ်သို့ပို့လိမ့်မည်။ သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီပလိုမာကိုဖိုင်ပေါ်တွင်ရှိသောလိပ်စာသို့ပို့လိမ့်မည်။
ကျောင်းဆင်းပွဲစာမျက်နှာပေါ်ရှိ link တစ်ခုကိုနှိပ်သောအခါကျွန်ုပ်မှားယွင်းသောသတင်းတစ်ခုရလာပါကမည်သူဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
Intent to Graduate ပုံစံကိုဖြည့်ပြီးဘွဲ့ယူရန်လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ system သည်သင့်ကိုထပ်မံခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင် error message ရလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘွဲ့ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဖြည့်ခဲ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ပုံတင်ရုံး၏ရုံးခန်းသို့ 239-938-7818 သို့ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ် registrar@hodges.edu.
ဘွဲ့ယူရန်လက်မှတ်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လိုမှာယူမှာလဲ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကျောင်းဆင်းပွဲအတွက်လက်မှတ်များထပ်မံလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။
သင်သည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘွဲ့လွန်ပုံစံကိုဖြည့်ပြီးသည့်အခါတက်ရောက်သူမိသားစု / သူငယ်ချင်းအရေအတွက်ပါ ၀ င်ရန်နေရာတစ်ခုရှိသည်။ ကျောင်းဆင်းပွဲအတွက်လက်မှတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်တက်ရောက်လိုသောမိသားစု / သူငယ်ချင်းများထပ်တိုးလာပါက၎င်းတို့သည်ကြိုဆိုရုံထက်မကပါ။
ကျောင်းဆင်းပွဲ ဦး ထုပ်ကိုအလှဆင်လို့ရမလား။
သင်၏ ဦး ထုပ်ကိုအလှဆင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အောင်မြင်မှု၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်အလှဆင်ထားသင့်ကြောင်းသတိရပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုအရသာကောင်းမွန်။ လေးစားစွာပြုသင့်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့ tassel ကိုမင်းရဲ့ ဦး ထုပ်နဲ့တွဲထားမယ်ဆိုတာသတိရပါ - သင်၏ ဦး ထုပ်၌တင်ထားရန် tassel ကိုတားဆီးနိုင်သည့်သင့်ရဲ့ ဦး ထုပ်၌ဘာမှမထည့်ပါနှင့်.
ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင်ကျွန်ုပ်၏ regalia ကိုကောက်ယူနိုင်ပါသလား
သင်၏ regalia ကို ၀ ယ်ယူရန်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားမတိုင်မီသင်မစောင့်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ အခမ်းအနားတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ချက်ပမာဏအတိုင်းအတာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော regalia ပမာဏအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းကတော့သင်၏ regalia ကိုအချိန်မရွေးမှာယူရန်ဖြစ်သည် http://colleges.herffjones.com/college/_Hodges/ ဒါပေမယ့်အမိန့်မှနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်သည် မေလ 21, 2021. အချိန်မီဖြန့်ဝေမှုသေချာစေရန်ကျောင်းသားများအားဤနောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီကြိုတင်မှာကြားထားရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
ကျောင်းဆင်းပွဲမေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မည်သူ့ကိုဆက်သွယ်သနည်း။
Regalia (ဦး ထုပ်၊ ဂါဝန်) အတွက်မူကားပါးပြင်ထည်များ၊ ချည်ထည်များ၊ ဒီပလိုမာဘောင်များ၊ တန်ဖိုးထားထိုက်သောတံသင်များ၊ universitystore@hodges.edu
ဒီပလိုမာများ၊ ဂုဏ်ထူးကြိုးများ၊ မှတ်တမ်းများ (ဒီဂရီချီးမြှင့်ခံရပြီးနောက်) အတွက် (၂၃၉) ၉၃၈-၇၈၁၈ တွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ် registrar@hodges.edu
Hodges University Alumni ကွန်ယက်သည်သင်၏အဆက်အသွယ် Hodges Alum နှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုဆက်လုပ်ရန်သင်၏လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ အသင်း ၀ င်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသင်း ၀ င်ဖြစ်ခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာမရှိပါ။ သင်၏အောင်မြင်မှုများကိုအခြားသူများအားမျှဝေနိုင်ရန်အတွက် Alumni ကွန်ယက်ကိုလိပ်စာနှင့်အလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလဲများ၊ ဆက်သွယ်ပါ alumni@hodges.edu။ လက်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာကျောင်းသားဟောင်းများဆက်သွယ်ရန်နှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများအချက်အလက်လက်ခံရရှိရန်အရေးကြီးသည်။